EA040 - OMG 3 na 1 Ikuku Nkuzi Nkuzi Ndi Nkuzi Pager, SOS na-akpọ sistemụ mkpu mkpu, Motion sensor night | Ngwọta OMG
EA040 - OMG 3 na 1 Wireless Nurse Call Caregiver Pager, SOS na-akpọ sistemụ mkpu mkpu, Mkpu mmetụta abalị.
3 na 1 Smart Cordless Receiver + motion sensor night light + Nurse Call Caregiver Pager, SOS akpọ mkpu multi-ọrụ mkpu usoro DIY kit
Nka na ụzụ nkọwapụta Smart Night Light Push Button SOS Button
Onye na-enweta ihe anyị na-enweta site n'aka ike dị ukwuu na-azọpụta batrị CR123A (nke gụnyere) nke ndụ na-aga ruo ụbọchị 365. Enwere ike iji ma chekwaa ego gị. Led Sound Light Mkpu mkpuchi mgbe onye nata na-ada ụda. Ị gaghị achọta otu ihe ahụ n'ahịa.
Ntughari dị mfe ma dị mfe: Enweghị wires achọrọ, ngwaahịa niile nwere ike ịdakwasị site na nkedo a ma ọ bụ site na mkpado na mgbidi. Mkpọpụta oku na-akpọ oku dị ntakịrị iji yie akwa, ebu na akpa, ma ọ bụ tinye ya n'ụra ma ọ bụ ị nwere ike ibudata ya ebe ọ bụla.
Ntucha mmiri: A na-ahọrọ bọtịnụ push ka mmiri mmiri na-ekpo ọkụ maka iji ya mee ihe n'èzí.
Nso nke ngwa: Ị nwere ike iji ya na ebe niile dịka ụlọ, ụlọ nkwari akụ, ụlọ ọrụ, ụlọ, villa, ụlọ akwụkwọ, ụlọ nkwakọba ihe na ihe ndị ọzọ.
Pịa bọtịnụ SOS maka 5 sekọnd, usoro ga-abanye ebe nkwụsị ma kwụsị mkpu.
Nzuzo 3506 35 Echiche Taa
EA020 - OMG Wireless Motion Sensor Pager - Mkpu…